Lovestruck Choose Your Romance 6.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Lovestruck Choose Your Romance
Lovestruck Choose Your Romance ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့စံပြအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင်ဤထူးခြားသောအမြင်အာရုံအချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထုဂိမ်းထဲမှာမှအစဉ်အမြဲလိုချင်တော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ပျော်မွေ့! သင်၏နှလုံးဖမ်းယူတဲ့ပုံပြင်ကိုရှာပါနှငျ့သငျ 60 ကျော်ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ရွေးချယ်ရေးထံမှအတူမေတ္တာ၌ကရြောကျချင်သူကိုဆုံးဖြတ်!
ငါနှင့်အတူအပြစ်: အခုနစ်သေစေနိုင်သောအပြစ်နှင့်အတူအန္တရာယ်, အပျော်အပါးနှင့်ဒုတစ်ဤလောကသို့ Fall ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲမှာခြောငျးသင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်အချစ်ဇာတ်လမ်းရှာဖွေပါ။
သူခိုးတွေဘုရင်မ: သင်ခေထြားဘိန်းက heist တက်မျောနေတဲ့အထိငတ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ခြင်း, ဒါရင်ခုန်စရာမဟုတ်ပါဘူး: ကမ္ဘာ့အများဆုံးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသူခိုး!
SWEET ဝိဇ္ဇာအတတ်အား: သင်တစ်ဦးကဝေမနှင့်အတူမေတ္တာ၌တစ်ဦးမှော်ကဖီးနှင့်ကျဆုံးခြင်းအပျေါထိ မိ. လဲကြသောအခါအချိုပွဲအတွက်ကိတ်မုန့်အပေါ်ရုံ icing များမှာ!
HAVENFALL ချစ်သူများ IS: Vampire, ဝံပုလွေများနှင့်နတ်ဆိုးများ, oh my! သင့်ရဲ့သဘာဝလွန် soulmate ဒီလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာရှာပါ!
အချစ် IN လူဆိုးဂိုဏ်း: Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးနှင့် sexy ဂိုဏ်းသင် ... နှင့်သင့်နှလုံးပြီးနောက်ပါ!
အချစ် & Legend: Destiny ဓားနဲ့တတ်၏လောကဓာတ်ရန်သင့်နေ့စဉ်ဘဝကနေသင်တို့ကိုယူ! ယခုတွင်သင်သည်ခုနစျပါးစိတ်ကူးယဉ်သူရဲကောင်းတစ်ဦးရန်သင့်ကံကြမ္မာချည်နှောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
STARSHIP ကတိပွု: ဝဠာ Explore နှင့်အနာဂတ်တွင်ဝေး set ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် spacefaring အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်မေတ္တာကတော့ galaxy ရှာဖွေတွေ့ရှိ!
ASTORIA: ကံကြမ္မာ'S နမ်း: ကမ္ဘာ၏ကံကြမ္မာရုံတစျခုနမ်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်! နတ်ဘုရားများနှင့်ဂရိဒဏ်ဍာရီ၏ Monsters နှင့်အတူမေတ္တာ၌ Fall!
ASTORIA: ပျောက်ဆုံးသွားသောနမ်း: တစ်ဖန်ဂရိနတ်ဘုရားများနှင့် Monsters romancing ၏ပဉ္စလက်ကိုစမ်းသပ်ပါ! ကံကြမ္မာရဲ့အနမ်း: သင်၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ညာဘက် Astoria ၏ရာသီ 1 ပြီးနောက်ရာအရပ်ကိုကြာအသစ်တစ်ခုလှည့်ဖျား-off ပြန်များမှာ!
Villain ညဥ့်: စူပါ-powered လူသားကမ္ဘာ၌, သငျသညျအစွမ်းထက်စူပါဗီလိန်၏အုပ်စုတစုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရှာပြီးမတ်ေတာရှာဖွေတွေ့ရှိပင်ည၏အမှောင်ဆုံးပွင်နိုင်ပါတယ်။
သင်္ဘောပျက်။ ရေမျောကမ်းတင်ဖြစ်နေသူ! အချစ်'S Adventures: မှားယွင်းတစ်ဦးကအပျော်အပါးခရုဇ်သငျသညျ5Sexy ကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်အတူတစ်ဝေးလံသောကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာသောင်တင်နေအရွက်!
LOVE & ကာကှယျရနျ: တစ်ခုမှာမိနစ်သင်ပုံမှန်ကောလိပ်ကျောင်းသားဖြစ်ကြသည်နောက်တစ်နေ့, သငျသညျအမရေိကနျပွညျထောငျစု၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကလေးသည်များမှာ!
SPEAKEASY ယနေ့ည: တရားမဝင်အရက်များ, ပူ, jazz, ပင်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ပြည့်စုံတစ် speakeasy ၏အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဒါပေမယ့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
Lovestruck Choose Your Romance အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Lovestruck Choose Your Romance အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Lovestruck Choose Your Romance အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Lovestruck Choose Your Romance အား အခ်က္ျပပါ
Lovestruck Choose Your Romance ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Lovestruck Choose Your Romance အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Voltage Entertainment USA, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.voltage-ent.com/privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: 1C:92:B9:4E:C7:D2:75:2C:0F:73:2D:B8:F6:69:1F:99:3B:AF:C0:F7
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Yuji Tsutani
အဖွဲ့အစည်း (O): Voltage Entertainment
Lovestruck Choose Your Romance APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ